Manaova fanamby hananganana ny fahaizanao mamorona | Famoronana an-tserasera
«7_Puente-Romano_Córdoba-06» avy amin'i aLm arquitectura dia nahazo alalana CC BY-NC-SA 2.0
Te hampivelatra ny fahaizanao amin'ny maha mpanao drafitra farany ambony anao ve ianao? Ireto misy olana manintona anao, olana iray hamoahana ny fahaizanao feno. Manoro hevitra anao aho hanaraka ny baiko napetraka, avy eo ny fanamby dia miharihary avy amin'ny mora ka hatramin'ny sarotra kokoa.
Inona no ilaintsika hiatrehana ireo fanamby ireo? Zavatra tena tsotra izay azonao an-trano. Taratasy, pensilihazo HB ary famafana malefaka. Manoro hevitra anao aho mba hijery zavatra isan'andro manodidina anao raha te hanana referansa.
1 Fanamby laharana 1: Sketch amin'ny endrika geometrika
2 Fanamby laharana 2: Mampiasà takelaka
3 Fanamby laharana faha-3: sary Freehand
4 Fanamby laharana 4: Mamorona alokao manokana
5 Fanamby isa 5: Mamorona aloka hita taratra
6 Fanamby laharana 6: Fanehoana zavatra isan-karazany
Fanamby laharana 1: Sketch amin'ny endrika geometrika
Manaova sary geometrika izay maneho ireo zavatra nofidianao (boribory, mahitsizoro, sns.), ary koa ireo faritra samihafa ao aminy. Raha vantany vao vita izany, dia azonao atao ny manatevin-daharana ireo endrika geometrika isan-karazany mba hanomezana endrika sary ny sarinao, hampifangaro azy rehetra ho iray.
Manoro hevitra anao koa aho maneho zavatra avy amin'ny fomba fijery samihafa. Azo antoka fa fampiharana tena tsara amin'ny fampiroboroboana fomba fijery izany.
Fanamby laharana 2: Mampiasà takelaka
Handrafitra takelaka iray izahay ary eo no hanaovantsika ny sary. Mba hahamora kokoa anao dia azonao atao ny mampiasa sary tianao halaina tahaka izany ary manaova sary eo amboniny koa. Amin'izany fomba izany no hanaovantsika sketsa quadrant isaky ny quadrant, izay ahafahantsika mametraka tsara ny refin'ny sary.
Fanamby laharana faha-3: sary Freehand
Misafidiana sary tianao ary andramo aseho azy io freehand, raha tsy miantehitra amin'ny endrika geometrika amin'ny voalohany na amin'ny grid, dia ny fanaovana sary mivantana.
Fanamby laharana 4: Mamorona alokao manokana
"Apollo" by rdesign812 dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Amin'ity fanamby ity dia hodinihintsika ny fisian'ny hazavana amin'ny zavatra, izay hamorona aloka hafa amin'izy ireo. Ny aloka izay apetraka amin'ny zavatra iray ihany, amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny tarehin-jiro, dia antsoina hoe alokalony manokana. Ilay iray avoakan'ny zavatra eny amin'ny faritra manodidina na zavatra antsoina hoe aloka taratra. Amin'ity fanamby ity dia hiezaka ny hanao ny aloky ny tenantsika manokana isika. Tsy ny faritra rehetra amin'ilay zavatra dia hanana haavo sy hazavana mitovy amin'izany, noho izany dia ilaina ny mitandrina ny fandehanan'ny hazavana eo aminy (raha mahery kokoa izy na kely kokoa, raha akaiky kokoa izy na lavitra). Io karazana alokaloka io dia antsoina hoe chiaroscuro. Tokony horaisina ihany koa fa ny jiro voajanahary dia tsy mitovy amin'ny hazavana artifisialy, toy ny avy amin'ny labozia. Hafa ny aloka izay hoforonina.
Mba hanatanterahana an'io fanazaran-tena mora io, asaina mamorona gradient voalohany amin'ny pensilihazo amin'ny taratasy misaraka, mahita ireo alokaloka samihafa azontsika foronina, satria samy hafa ny pensilihazo tsirairay arakaraka ny isany. Azontsika atao ny mamorona diplaoma samihafa amin'ny pensilihazo samihafa, izay hanome antsika karazany maro kokoa rehefa mamorona aloka.
Avy eo isika dia afaka manamboatra endrika geometrika fototra toy ny sphere na goba ary manandrana manao ny alok'izy ireo, amin'ny alàlan'ny famirapiratana amin'ny jiro amin'ny zoro samihafa amin'izy ireo.
Avy eo manandrama mamorona alokaloka anao manokana ho an'ny zavatra sarotra kokoa.
Fanamby isa 5: Mamorona aloka hita taratra
Mba hamoronana ny aloky ny zavatra hita taratra, tsy maintsy dinihintsika ihany koa ny mombamomba ny hazavana hita amin'ny fanamby isa 4, amin'ny fiheverana, ho fanampin'izay, manao ahoana ny drafitr'ilay zavatra, satria zava-dehibe amin'ny sary ny alokalony.
Fanamby laharana 6: Fanehoana zavatra isan-karazany
Manaova sary mifanila zavatra maromaro. Alao an-tsaina hoe nilatsaka tamin'izy rehetra ny hazavana. Tsy maintsy jerenao ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo sy ny hazavana, satria ny zavatra iray dia mety manome aloka iray hafa. Miezaha manao sary ny alokanao aloha ary avy eo ireo aloka taratra. Amin'ny tany, ireo endrika ireo dia hokapaina amin'ny fisian'ny zavatra hafa. Ity no fanamby sarotra indrindra amin'ny rehetra, saingy amin'ny fampiharana dia azo atao ny zavatra rehetra!
Ary ianao, sahy mampivelatra ny fahafahanao kanto feno amin'ny alàlan'ny fanaovana sary ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Manaova fanamby hananganana ny fahaizanao mamorona